Naya Post Nepal | गेस्ट हाउस मा मृ’त भे’टिए की लाहुरेनी सुमित्रा’को ह’त्यामा संलग्न सा’र्वज’निक (भिडिओ सहित)
गेस्ट हाउस मा मृ’त भे’टिए की लाहुरेनी सुमित्रा’को ह’त्यामा संलग्न सा’र्वज’निक (भिडिओ सहित)
धरान,। धरान-१८ स्थित न्यू का’न्तिपुर हो’टल एण्ड गेष्ट हाउस मा मृ’त भे’टिए की सुमित्रा तामाङ को ह त्या’मा संलग्न को आ’रोप’मा एक युवा प’क्राउ परे’का छन् । प”क्राउ पर्ने’मा धनकुटा पाख्रि’बा सी–६ फलाँटे’का २४ वर्षीय जी’वन, राम भनी चि’निने वि’नेश राना मगर रहेको इला’का प्रहरी
कार्याल’य धरानका डिए’सपी नरेन्द्र कुँवर’ले जान’कारी दिए । उन लाई ध’रान’मा महिला मृत भेटिए को पाँच दिन पछि प्रहरी ले धरा नमा सार्वजनिक गरे को हो । प्रहरी’का अनुसार उन लाई धनकुटा–११ स्थित छ’थर जोर पार्टी स्थित सुराली घर बाट प क्राउ गरेर ध’रा न ल्या’इए को थियो ।
उनी ससु’राली घरमा आए को भन्दै आ’फन्त ले नै प्रहरी डाके का थिए । गत मङ्गल’बार इ’टहरी बस्दै आए’की पाँचथर’को मिक्ला’जुङ गाउँ पालिका १ की ३९ वर्षीया सु’मित्रा मृत भेटिए की थिइन् । उनी गत आइतबार देखि ह’राए’की थिइन् । डिए’सपी कुँव’रले उन को साथ’मा नाग’रिकता,
मतदाता परि’चयपत्र, स्कुल’को फि तिरे’को बिल’लगायत भेटे पछि त्यसकै आधार’मा सोधी’खोजी गर्दा उन’की छोरीले पहि’चान खु’ला ए’को जान’कारी दिए । उन’का श्री’मान् भार’तीय सेना’का पूर्व गो र्खा सै’निक रहे’को र पेन्सन भ’इसके पछि बु्रनाइ’मा काम गर्न पुगे ’का थिए ।
दुई दिन देखि हो’टल’मा नाम टि’पाएर होटल’को कोठा नं. १०९ मा बस्दै आए’का उनी हरु श्रीमान्–श्रीमती जस्तै गरेर होटल मा कोठा बुक गराए थिए । आ’राम गर्न भन्दै उनी’हरु आए’का उनी हरु ले श्री मान–श्रीमती भनेर भने पछि कोठा दिए को होटल स’ञ्चाल’क ले जान’कारी दिए’का छन् ।
होटल’का कर्मचारी’ले सोमबार दुवै जना लाई खाना लगेका थिए । तर मङ्गल’बार बिहान सँगै बसे’का पुरुष होटल लाई जान’कारी नदि ई फ’रार भए’का थिए । ती पुरुष’ले होटल’मा जी’वन मगर भनेर ना म टिपाए’का थिए । प्रहरी’ले प्रारम्भिक अनुसन्धान’ले तामाङ को ह”त्या भए को देखिएको जना’एको थियो ।
मृतक महिला को दुवै आँखा को डिल, घाँटी, जिउ, हात खुट्टा लगा यत’मा चोट’पटक, नि’लडाम देखिए’को थियो । मृ’तक को एक’ज ना १८ वर्ष’का छोरा र १३ वर्षी’या छोरी छन् । उनी हरु लाई पढाउन भनी मृ’तक सु’मित्रा’ले इटहरी’ मा डे’रा लिएर बसे’की थिइन् ।
मृ’तक को आफन्त अनिता तामाङ का अनु’सार त्यो दिन अ’र्थात् गत आइत’बार मृ’त’क सुमित्रा छोरी सहित इटहरी स्थित स्कुल मा छोरा छोरी को स्कुल फि तिर्न भनी घर’बाट हिँडे’की थिइन् । त्यस पछि उनी इटहरी चोक’मा आ’एर छो’री लाई घर पठाइन् ।
छोरी’का अनु’सार मृ”तक सुमित्रा ले आफू ‘कोरोना’को खोप खो’ जेर भए पनि लगाएर आ’उँछु, तिमी घर जाँदै गर’ भन्दै घर पठा ए’की थि’इन् । आफन्त’का अनुसार साँझ सम्म पनि घर नफिरे प छि उन लाई छोरी ले फो’न गर्दा ‘मेरो सानो काम प’रयो, म आ’ज आउन स’क्दिनँ’ भनेर छोरी लाई भनेकी थिइन् ।
यस अघि पनि मृ तक महिला साथी को घर तिर पुग्ने हु’नाले उनी हरु ले वा’स्ता गरेनन् । यस अघि ती पुरुष र महिला बीच हिम’चिम हुँदै आए’को आफन्तले बताए’का छन् । ती आफन्त का अनु’सार महिला र पुरुष बीच यस अघि पनि झग’डा समेत भए को थियो । झ’गडा भए पछि उन लाई ती महिला ले प्र’हरी सम्म पुरयाए’की थिइन् । केही सह’मति पछि ती पुरुष लाई छुट’कारा समेत मिले’को आ’फन्त को भनाइ छ ।
किन भयो ह”त्या ?
प्रहरी को प्रा’रम्भिक अ’नुसन्धान ले ह त्या को का’रण सामान्य रहे को बताउँ’छ । जिल्ला प्रहरी कार्या”लय सुनसरी’का एसपी स’ञ्जय सिंह थापा का अनु’सार ती महि’ला सो दिन अर्कै पुरुष सँग मोबाइ ल’मा कुरा’कानी गरि रहेको र त्यही मो’बाइल’मा बोले’को निहुँमा प’टक पटक झ’गडा हुँदा ह त्या भए को देखिन्छ ।
‘गत १५ गते बिहान धरान आई मृ तक सँग मोबा’इल सम्पर्क गरी भे’ट’घाट भई सो होटल को कोठा मा बसे को बेला दुवैले मा’दक पदार्थ खाए को देखिन्छ’, उनले भने, ‘गत १६ गते बेलु’का निज मृ ’तक’ले अन्य पुरुष मानिस सँग मोबाइल’मा बोले को भन्ने विषय मा वि”वाद हुँदा मृ”तक लाई लात,
मुक्का ले कु’ट’पि’ट गरे को र राति ११ जबे तिर पुनः सोही विषय मा वि”वाद हुँदा विनेश ले दुवै हात ले मृ तक को घाँ’टी थि”ची ह”त्या ग रे को पाइएको छ ।’ प्रहरी का अनुसार त्यस पछि खाट मा सु”ताई ओढ्ने ओ’ढाइ ब्याग’मा रहे’को ५ हजार नगद र मृ”तक को मोबाइ ल समेत लिई सोही होटल को पछा’डि’तर्फ चा’बी नलगाए’को अव स्था’को चेन’गेट खोली उनी भागे’का थिए ।
प्रहरी’ले ह त्या’मा अन्य मानिस सं’लग्न नरहे’को जनाए’को छ । वि गत १ वर्ष अघि देखि मृ’तक को विनेश सँग चिन’जान भई प्रेम स म्बन्ध रहे’को र उनी हरु बीच पटक पटक भेट घा’ट समेत हुने गरे को प्रह’री ले जनाए को छ । मगर डेरा
कोठा न’जिकै भाडा मा बस्ने ग’र्दथे भने सिटी स’फारी चालक समेत रहे’को पाइए’को प्रहरी’ले जाए को छ । ह”त्या’मा संलग्न युवा को प नि तीन’जना छोरा छोरी समेत रहे’को पाइए को प्रहरी ले जनाए को छ । उनी माथि सात दिन’को म्याद थ’प भई थप अनु’सन्धा’न भइ’र हेको प्र’हरी’ले जनाए’को छ ।
२०७८ फाल्गुन २३, सोमबार प्रकाशित 1 Minute 529 Views